2007-09-27 @ 10:47 in Toekarena
Hira nanana ny lazany tamin’ny fotoan’androny, nilaza ny zavamisy tamin’izany fotoana izany. Efa ho telopolo taona lasa izay, tokony ho efa lefy amin’izao taonarivo fahatelo izao, nefa dia mbola miverina amin’ny heriny indray ankehitriny ilay hiran’ny tarika Mahaleo namatrapatraka ny nataon’ireo mpanondrana ny harena voajanaharin’I Madagasikara rehetra, na avy anaty tany io, na ety ambonin’ny tany.
Naseho sary tamin’ny televiziona, noresahin’ny rehetra, saingy indrisy tsy hitako, izany nolazain’ny televiziona Reinoney ho Emeraoda milanja 536 kg izany. Tao anaty vanim-potoanan’ny fifidianana indrindra no nipoitra io resaka io fa somary niandry kely vao nipoaka amin’izay. Natao fampirantiana tao amin’ny nosy akaiky tokoa manko io vatosoa io, izay nolazainy fa avy teto Madagasikara, ary nirehareha mihitsy ilay Shinoa nahazo azy. Nangataka alalana hitondra azy any Shina manko ranamana saingy tsy navelan’ny fitondrana frantsay raha tsy mandoa ny hetra mifanaraka amin’ny sandan’ny vatosoa. Teo vao taitra ny rehetra. Nifanontany amin’izay hoe nivoaka an-tsokosoko io sa nivoaka ara-dalàna? Ary mba manao ahoana moa ny vola niditra tamin’ny kitapom-bolam-panjakana?
Voatery niditra an-tsehatra ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany Donat Andriamahefamparany (hitantsika amin’ny gazety any izay nambarany), nilaza fa tsy nisy sora-pamoahana Emeraoda 536kg tany fa Beryl 536kg no hita. Nambara ihany koa fa raha Emeraoda dia tsy maintsy ny “Guichet unique” no manome alalana, fa raha beryl kosa dia ny sampan-draharaham-paritany ihany dia efa afaka mamoaka azy ary dia tany ilay orinasa no naka fahazoan-dalana. Nohazavaina manko fa tsy tafiditra ao amin’ny sokajin’ny atao hoe vatosoa sarobidy ny beryl fa vato fipaika fotsiny. Dia nanambara ny Minisitra avy eo fa asiana ny “contre-expertise” avy amin’ny minisitera na tena Emeraoda tokoa io vato io na beryl araka ny nosoratana tao amin’ny taratasim-pamoahana azy teny amin’ny seranana (nivoaka ara-dalàna soa aman-tsara ilay zavatra izany!).
Nisendaotra indray ny mpikarajia. Raha tsy nidehadehaka nandraty ilay vatosoa izany ilay Shinoa dia vitavita ho azy tany ity raharaha ity? Hita mihitsy fa natao ho an’ny vahoaka tsotra ny Bianco fa tsy kitihiny mihitsy ny vaventy! Tampi-maso aseho ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fotsiny ny nananganana io sampan-draharaha anankiray io. Iza no nanao ny sonia? Iza moa no nampianatra ny Malagasy ny karazam-bato ka raha izay ve ny nolazain’ny nampianatra antsika dia ho sahy hanohitra izany isika? Sy ny karazany tsy ho tanisaina lava intsony. Mihevitra manko ny maro fa fanodikodinan-dresaka fotsiny ny tenin’ny Minisitra. Tahaka ny momba an’I Steeve Turmell izay tsy fantatra intsony ny misy azy amin’izao fotoana izao (nangina tsy miteny manko ny fanjakana ka mitaky ny misy azy ny gazety iray miteny malagasy). Tany amin’ny faraparan’ny adi-hevitra no nilaza ilay ramatoa fa iray karazana ihany [Be3Al2]ny beryl sy ny emeraoda, ary ao anatin’ny sokajin’ny beryl ihany koa ny emeraoda fa manana ny lafiny mahatsara azy kokoa. Hein! Hahita fialana bala indray izany ilay orinasa raha izany k’ty. Tsy nandainga aho, hoy izy fa jereo ny rakibolana.
Ny hita tahaka ny Iceberg fotsiny io raharaha Emeraoda naranty tao La Réunion io fa mihevitra ny be sy ny maro ankehitriny hoe mbola aiza ireo tsara afina ny fanondranana azy. Fa ny azy, tokoa, ny valizy efa feno ny devizy. Eto ampamaranana miarahaba an-dRajiosy miditra amin’ny sehatry ny vohikala. Mahavità be!